Ụmụ akwụkwọ ole nọ na UP Manila? - zuru ike na mba ndị na-ekpo ọkụ
Ụmụ akwụkwọ ole nọ na UP Manila?
Ụmụ akwụkwọ ole ka UP Manila nwere?
Kedu kọleji ole dị na UP Manila?
Ego ole bụ ụgwọ akwụkwọ na UP Manila?
Mahadum Philippines ọ bụ n'efu?
Enwere SHS na UP Manila?
Kedu ihe kpatara Mahadum Philippines kacha mma?
Mahadum nke Philippines
Ụmụ akwụkwọ 56,015 (2019)
Ụmụ akwụkwọ ndị ọzọ 2,990 (ọkwa bụ isi) (2019)
Mahadum nke Philippines (UP) bụ mahadum mba nke obodo. E hiwere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ ka elu a na 1908 ma ugbu a bụ usoro mahadum nke mejupụtara ya mahadum asatọ mejupụtara na otu mahadum kwụụrụ onwe ya gbasaa n'ime 17 campuses na agwaetiti.
Mahadum mejupụtara / Campus
Mpempe akwụkwọ nkuzi UP Diliman, UP Los Banos, UP Manila (kwa otu) UP Baguio, UP Mindanao, UP San Fernando, UP Visayas (kwa otu)
Ịnweta zuru ụwa ọnụ iji nweta ogo mmụta ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke 2017 (Akwụkwọ na-akụzi n'efu) The UP Open University na-emejuputa RA No. 10931 nke a maara dị ka "Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017" na mmejuputa iwu na ụkpụrụ (IRR) nke kwadoro na bịanyere aka na 22 February 2018.
Banyere UPM-SHS | UP Manila School of Health Sciences.
Gịnị mere m ji họrọ ụlọ akwụkwọ a: Mahadum Philippines bụ naanị mahadum steeti mbụ na mba anyị. Ụlọ akwụkwọ ahụ a maara na ọ bụ kacha mma n'ihe gbasara agụmakwụkwọ dị mma na ọnụ ahịa nkuzi dị ala ma e jiri ya tụnyere mahadum ndị ọzọ.
Nke a dị mkpa: Ebee ka ndị nna nna Filipin si bịa?
Nke a na-arụsi ọrụ ike convergent efere ókè gbatịrị n'akụkụ abụọ Philippines Islands, si
Kedu obodo nwere oge dị iche na Philippines?
Kedu ngwa nnyefe kacha mma na Philippines?
Kedu ka ị ga-esi kpọọ Tower of Hanoi?
Ajụjụ gị: Onye webatara basketball na Philippines?
Ndị Japan ole bi na Singapore?
Ajụjụ ugboro ugboro: Gịnị ka a na-akpọ otu egwuregwu bọọlụ Thailand?
Ajụjụ gị: Ego ole bụ tiketi ụgbọ elu si London gaa Manila?